मेडिकल पेशा-मानवता, आफ्नै इच्छा वा पैसा ! - Enepalese.com
मेडिकल पेशा-मानवता, आफ्नै इच्छा वा पैसा !
महेश भट्टराई ,मेरिल्याण्ड, २०७७ वैशाख ८ गते १:१५ मा प्रकाशित
> हामी नेपाली परम्परा बाटै छोराछोरीको भबिष्य बाबुआमाले छनौट गर्छ्यौ ! छोराछोरी डाक्टरै बनोस भन्ने आशा धेरैले राखेका हुन्छन !
> आज आएर प्राय छोरीहरू नर्सिड पेशामा होम्मिएको धेरै पाइन्छ ! एकातिर सजिलै जागिर पाइने र अर्को तिर बिदेश काम गर्न जान समेत मिल्ने ! अझै बिकसित देश बाट केटा हेर्न आयो भने नर्सिड पढेको केटी नै रोज्ने ! पैसा पनि राम्रौ हुने ! फाइदै फाइदा !
> आज पैसा कै कारणले डाक्टर र नर्श मात्र नभै सबै मेडिकल पेशामा आकर्षण र मोह निकै बढेको छ !
> रोजाई किन र कस्को ?
> के साच्चै मेडिकल पेशा तेति सजिलो पेशा हो ? के रोजाई आफ्नो हो ? राम्ररी बुझेको लागेको हो त ? डा. गोबिन्द केसीको जस्तै के सेवाभाव अन्तरआत्म बाटै प्रफुष्टित भएको हो !
> कि जागिर र पैसाको मोह मात्र हो !
> के पेशा सजिलो छ त ?
> पटक्कै छैन ! चौबिसै घन्टा सातै दिन खटेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ ! बिदा आफ्नो रोजाईले कहिल्यै पाईदैन ! सधै संबेदनसिल मानविय भै काम गर्नु पर्ने हुन्छ ! मानव जिवन-मृत्यु संग सम्बन्धित हुनाले निकै ध्यान र होशियार पूर्बक काम गर्नु पर्ने हुन्छ ! सानो गल्ति वा लापर्बाहिले मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ !
> के यो सफा सुघ्घर पेशा हो ?
> पक्कै होइन ! शरिरबाट फालिने सबै बिकार तत्व संग खेल्नु पर्ने हुन्छ ! दिशा, पिसाब, र्याल, खकार, कफ,पिप, चिरफार, रगत …! साथै बिभिन्न बिकिरण संग पनि असर पार्ने डर छदैछ ! अन्त्यमा लाशको समेत ब्यबस्थापन र पोष्टमार्टम छदैछ !
> रोग सर्ने डर ?
> बिभिन्न सरूवा रोगहरू HIV, Hepatitis, Meningitis, Encephalitis, Measles, chickenpox, TB, cholera, Malaria, Rabies, Fungal, Bacterial, viral …सबै सरूवा रोगहरूको सामना गर्नु छदैछ !
> MRSA, VRE, contact, droplets, airborne सबै थप छदैछ !
> मानवता र पेशा ?
> यति धेरै जोखिम थाहा पाएर वा जानेरै यो पेशा रोजेको हो त ? आज कोरोना संग expose भै काम गर्दै गर्दा धेरै स्बास्थ्यकर्मिहरू र परिबारको मन खुशी होला ? कहि, यदि, कतै, बरू, भो … जस्ता बिकल्प सोच आएनन होला !
मेरो बुझाई र अनुभव !
> स्बास्थ्यकर्मिको पेशा एक मानविय पेशा हो ! यो निकै संबेदनसिल हुन्छ ! किनकी यो मानव जिवन संग सम्बन्धित हुन्छ ! यो पेशामा काम गर्दा पैसा र जागिर भन्दा अन्तरआत्म बाटै मैले सेवा गरिरहेछु भन्ने मनोभावना र आत्मसन्तुष्टी हुनु पर्छ ! यदि पाइएन वा आएन भने यो छनोट गलत हुन सक्छ ! तनाव वा जबरजस्त गरेको कामको परिणाम ठिक वा सहि नआउन सक्छ !
> Hospital मा काम गर्दा एक जना coworker nurse ले भनेको संझन्छु “आज भोलि मलाई दिशा, पिसाब, पिप, रगत र रोगहरू सबै सामान्य लाग्छ ! डर र घिन लाग्न छाडि सक्यो !”
> मेरो श्रीमती भन्ने गर्छिन “ हामीले सेवा दिने हरेक बिरामी लाई परिबारको सदस्यको रूपमा हेर्यौ भने काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ र आत्म सन्तुष्टि मिल्छ ! कसैले नदेखे र मुल्याकंन नगरे पनि भगवान हेरिरहेका छन, म खुशी धेरै छु !”
> जसरी एउटा गरिबले झुपडीमा वा माग्नेले सडकमा बसेर सबै मौसम र रोग संग लड्दै आफ्नै प्रतिरक्षा शक्तिले जिवन कटाउछन ! त्यसरी नै स्वास्थ्यकर्मिहरूले पनि धेरै रोगहरू संग एक्सपोज भै सक्ने हुनाले प्रतिरक्षा शक्ति बनाई सकेका हुन्छन ! त्यसेले म आफुलाई पूर्ण सुरक्षित ठान्छु !
> यदि हामी स्वास्थ्यकर्मिले नै रोगी लाई थू थू र दुर दुर गरेर घृणा गर्यो भने उपचार कसले गर्ला ?
> रोग र बिरामीको बारेमा राम्ररी नबुझि वा बुझेर पनि सिकसिक, खसखस,धेरै शंका उपशंका र बढि नै मानसिक तनाव लिनु राम्रो होइन ! यदि तनाव छ भने आफ्नो निर्णय पुनर्बिचार गर्नु राम्रो होला ?
> आफुले गरेको काममा कर काप होइन आत्मसन्तुष्टि र सन्तोष हुनु जरूरि छ !
> पैसा कै लागि हाम फालेका एक दुई खराब स्बार्थि मनोबृति भएका स्बास्थ्यकर्मिले सबै स्वास्थ्य क्षेत्र धमिलो पार्नु कदापी राम्रो होइन !
> यो शंकटको बेला PPE को अभावमा आफ्नो ज्यान लाई जोखिममा राखि सेबा गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मि सिपाहि हरू लाई मनै बाट नमन गर्नै पर्छ !